७ दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ, ॐ लेखि सेयर गरौं ! – live 60media
सात दिनभित्र तपाईले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला, ॐ लेखि सेयर गरौं!!! ॐ मात्र उच्चारण गर्नु भयो भने पुरा ब्रमाण्ड्को देबि देबताको शक्ति हुन्छ । त्यसैले देखेको 30 सेकेण्ड भित्रैमा शेयर गर्नुहोस ।७ दिन भित्रमा तपाइले नसोचेको काम पनि बन्नेछ बिल्कुलै बेवस्ता नगर्नुहोला !!! ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ यो पनि पढ्नुस : परापूर्व काल देखी अहिले सम्म शिवलि’ङ्गलाई किन पुजा आजा गरी मान्छन ? किन के का लागि पुजा गर्छन । ।सबैलाई संस्कृतको ज्ञान हुँदैंन ।
आउनुस् यसको अर्थ जान्नुस् र भ्रमबाट बच्नुहोस्ः लिं’गको अर्थ संस्कृतमा चिन्ह, प्रतीक हुन्छ ।शिवलिंगको अर्थ शिवको प्रतीक भन्ने हुन्छ । पुरुष लिं’गको अर्थ पुरुषको प्रतीक भन्ने हुन्छ । यसैगरी स्त्रीलिं’गको अर्थ स्त्रीको प्रतीक भन्ने हुन्छ । र नपुसंक लिं’गको अर्थ नपु’संकको प्रतीक भन्ने हुन्छ ।आखिर के हो त शिवलिं’ग ? शुन्य, आकाश, अनन्त, ब्रह्माण्ड र निराकार परमपुरुष भएकाले यसलाई लिं’ग भनिएको हो । स्कन्दपुराणमा आकाश स्वयंम लिं’ग हो भनिएको छ । शिवलिंग वातावरणसहित घुमिरहेको धर्ति तथा सारा अनन्त ब्रह्माण्डको अक्ष धुरी नै लिं’ग हो । शिवलिं’गको अर्थ अनन्त हुन्छ । अर्थात यसको कुनै सुरुवात पनि हुन्न र अन्त पनि । शिवलिं’गको अर्थ लिं’ग वा यो’नी होइन ।वास्तवममा यस्तो ब्याख्या दिगभ्रमित गर्नका लागि अंग्रेजहरुले गरेका हुन् ।हामीलाई नै थाहा छ, एउटा शब्दलाई भिन्न—भिन्न भाषामा अलग—अलग अर्थ निकाल्न सकिन्छ ।
← कोदोको खिर बनाएर “बीबीसी मास्टर सेफ” को उत्कृष्ट ४ मा पुगे सन्तोष: नेपाली खाना विश्वभर चिनाउँदै ! (भिडियो सहित)
sad ….छोरी म छिट्टै नेपाल आउँदै छु भनेको केहि दिनमै कुवेतमानै अस्ताए डम्बर बहादुर साउद →